SomaliaReport: Villa Baydhaba La Wareer, Saddex Dhimatay
Ugu yaraan saddex ayaa ku dhimatay ilaa 5 kale o ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaadhka ahan dhaawax baa ka soo garaay ka dib markii ay xoogagga Al-shabaab galabnimadii axadda madaafiic ku garaaceen xarunta Villa Baidhabo oo ah saldhigga milatari ee dawladda ku meel gaadhka ah.
Hugunka madaafiicda ayaa laga maqlayey qaybo ka tirsan magaalada, waxay sidoo kale madaafiicdaasi ku dul habsadeen xaafado ay bulsho rayid ah ku noolaayeen halkaas oo uu dhaawac ku so gaaray laba ruux.
Sida uu ku soo waramayo goobjoge ka ag dhawaa xarunta Villa Baydhabo, ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah ayaa dilay wiil dhalinyaro ah oo sida loa sheegay soo hagayey madaafiicda.
Weerarkan hoobiye-yaasha ah ayaa looga dan lahaa kulan xarunta Villa Bay dhabo ku dhex marayey saraakiil sare o ka wada tirsan dawladda.
Xoogagga midawga Afrika oo taageera ciidamada dawladda ayaan wax faahfaahin ah ka soo sarain arinkaa.